N'ihi beginners | November 2019
Esi ewepụ kọmputa na kọmputa
Editor Si NhọRọ November 17,2019
Isi N'ihi beginners
Ọtụtụ mgbe, mgbe m guzobere ma ọ bụ rụzie kọmputa maka ndị ahịa, ndị mmadụ na-ajụ m otú m ga esi esi na - arụ ọrụ na kọmpụta - nke klas kọmputa iji debanye aha, nke akwụkwọ ịzụta, wdg. N'ikwu eziokwu, enweghi m ike ịza ajụjụ a. Enwere m ike igosi na ịkọwa eziokwu na usoro ịrụ ọrụ ụfọdụ na kọmputa, mana enweghị m ike "ịkụziri otu esi rụọ ọrụ na kọmpụta".
Esi ehichapụ ibe na ụmụ klas gị
Otu n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị si n'aka ndị ọrụ bụ otu esi ehichapụ ibe gị na ụmụ klas gị. N'ụzọ dị mwute, ihichapụ profaịlụ na netwọk mmekọrịta a abụghị ihe doro anya, ya mere, mgbe ị gụrụ azịza ndị ọzọ na ajụjụ a, ị na-ahụkarị otú ndị mmadụ si ede na ọ dịghị usoro dị otú ahụ. Ọ dabara, usoro a dị, na n'ihu gị bụ ntụziaka zuru ezu na nke a na-enye nghọta banyere ihichapụ ibe gị ruo mgbe ebighi ebi.
Akwụkwọ adịghị emeghe, ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ndị klas gị
Na saịtị a, e nwere atọ, n'ozuzu, isiokwu otu ụdị ahụ, nke isiokwu ndị a na-egosi na isiokwu ahụ n'elu. Enweghi ike imeghe akwukwo na ihe omuma I nweghi ike ibanye na umu klas gi .. N'onu otutu ihe, ihe mere na ebe ufodu (ma obu ihe niile n'otu ugbua) abughi njehie na faịlụ ndi ozo ma obu ihe ndi ozo di n'ime ya ma o bughi ya.
Nyochaa faịlụ maka nje virus dị na Kaspersky VirusDesk
N'oge na-adịbeghị anya, Kaspersky na-arụ ọrụ ọhụrụ ntanetịime kọmputa, VirusDesk, nke na-enye gị ohere iṅomi faịlụ (mmemme na ndị ọzọ) ruo 50 megabytes na nha, nakwa yana saịtị Ịntanetị (njikọ) na-enweghị wụnye software antivirus na kọmputa gị site na iji otu ọdụ data ndị ahụ Kaspersky anti-virus ngwaahịa.
Kedu ihe ndekọ LOST.DIR na gam akporo, ọ ga-ekwe omume ihichapụ ya na otu esi weghachite faịlụ site na folda a
Otu n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị maka ndị ọrụ ọhụụ bụ ihe ndekọ LOST.DIR dị na USB ekwentị USB USB ma nwee ike ehichapụ ya? Ajụjụ kachasị mkpa bụ iji weghachite faịlụ site na nchekwa a na kaadị ebe nchekwa. A ga-atụle ajụjụ abụọ a n'oge a na akwụkwọ ntuziaka a: ka anyị kwuo banyere faịlụ ndị nwere aha dị iche iche echekwara na LOST.
Ezigbo nchịkọta vidiyo na-emeghe
Ogologo oge gara aga, saịtị ahụ bipụtara isiokwu Best Free Video Editors, bụ nke gosipụtara usoro nhazi ihe nkiri dị iche iche na ihe ntinye ederede vidiyo ọkachamara. Otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ ahụ jụrụ ajụjụ ahụ: "Gịnị gbasara Openshot?". Ruo oge ahụ, amaghị m banyere onye editọ vidio a, ọ bara uru ịṅa ntị na ya.
Esi jikọọ eriri USB USB na ekwentị ma ọ bụ mbadamba ekwentị
Ọ bụghị onye ọ bụla maara banyere ike ijikọ USB flash mbanye (ma ọ bụ ọbụna diski ike mpụga) na smartphone, mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ ndị ọzọ, nke na ụfọdụ nwere ike ọbụna bara uru. N'ime ntuziaka a, ọtụtụ ụzọ iji mejuputa atumatu a. Na nke mbu - otu esi ejikọ USB flash mbanye na ekwentị na mbadamba nkume taa (t.
Esi agbaghari vidiyo 90 ogo
Ajuju nke otu esi agbagharia vidiyo 90 di iche iche setara site na ndi oru n'inwe okpukpu abuo: otu esi agbaghari ya mgbe igwu egwu na Windows Media Player, Akwukwo ndi ozo di iche iche (tinyere Home Cinema) ma obu VLC na otua esi agbagharia vidio ntaneti ma obu n'ime usoro mmezi vidiyo ma chekwaa ya na ihu ala.
Otu esi achọpụta oghere nke motherboard na nhazi
Oghere dị na motherboard kọmputa bụ, nkwekọrịta, nhazi nhazi maka ịwụnye nhazi ahụ (na kọntaktị na nhazi n'onwe ya), dabere na ụdị ahụ, enwere ike itinye ihe nhazi ahụ n'otu oghere dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na CPU bụ maka oghere LGA 1151, ịkwesịrị ịnwa ịwụnye ya na motherboard gị na LGA 1150 ma ọ bụ LGA 1155.
Otu esi belata akara ngosi desktọọpụ (ma ọ bụ mụbaa ha)
A na-ajụkarị ajụjụ banyere iji belata akara ngosi desktọọpụ site n'aka ndị ọrụ ha na-amụba na mberede n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Ọ bụ ezie na e nwere nhọrọ ndị ọzọ - na ntuziaka a m gbalịrị iji ihe niile kwere mee. Ụzọ niile, ma e wezụga nke ikpeazụ ahụ, na-emetụta Windows 8 (8.1) na Windows 7.
Mpịakọta IPS ma ọ bụ TN - nke ka mma? Ma banyere VA na ndị ọzọ
Mgbe ị na-ahọrọ otu nyocha ma ọ bụ laptọọpụ, a na-enwekarị ajụjụ nke matrikụ ihuenyo ịhọrọ: IPS, TN ma ọ bụ VA. Na njirimara nke ngwongwo e nwere ma nsụgharị dị iche iche nke matrices ndị a, dị ka UWVA, PLS ma ọ bụ AH-IPS, nakwa ngwaahịa ndị dị obere na teknụzụ dị ka IGZO. Na nyocha a - n'ụzọ zuru ezu banyere ọdịiche dị n'etiti di na nwunye dị iche iche, banyere ihe ka mma: IPS ma ọ bụ TN, ikekwe - VA, na ihe kpatara azịza nke ajụjụ a abụghị mgbe niile.
Kedu ihe mere ọsọ nke Intanet n'okpuru onye na-enye ọrụ
O yikarịrị ka ị na-aṅa ntị n'eziokwu ahụ na na nkwụsị ọ bụla nke ọ bụla na-eweta ya, a na-ekwu na ọsọ ọsọ Internet ga-abụ "ruo X megabits kwa nke abụọ." Ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iche na ị na-akwụ ụgwọ maka Internet Megabit 100, ebe ezigbo ọnụọgụ Ịntanet nwere ike ịgbanwu, ma ọ gụnyere "ihe ruru 100 megabit kwa nkeji".
A na - ahapụ ngwa ngwa ekwentị - anyị na - edozi nsogbu ahụ
Mkpesa banyere eziokwu ahụ bụ ekwentị Samsung ma ọ bụ ekwentị ọ bụla a na-ahapụ ngwa ngwa (nanị smartphones nke ika a bụ ihe a na-ahụkarị), Android riri batrị ahụ ma bụrụ nke na-ezughị ezu maka otu ụbọchị onye ọ bụla nụworo karịa otu ugboro, ma yikarịrị ka ọ na-eche ya. N'isiokwu a, m ga-enye, enwere m olileanya, ndụmọdụ bara uru na ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na batrị ekwentị na Android os na-ahapụ ngwa ngwa.
Ụzọ 8 iji zipu nnukwu faịlụ na Intaneti
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzigara mmadụ nnukwu faịlụ, mgbe ahụ i nwere ike ịchọta nsogbu, dịka ọmụmaatụ, site na ozi-e nke a agaghị arụ ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ọrụ ntanetịime faịlụ na-enye ọrụ ndị a maka ụgwọ, n'otu isiokwu ahụ anyị ga-ekwu banyere otu esi eme nke a maka n'efu na n'enweghị ndebanye aha.
Office Add-Ins Microsoft Office
Ole na ole ndị ọrụ Microsoft Office maara ihe tinye-ins bụ maka Okwu, Excel, PowerPoint, na Outlook, ma ọ bụrụ na ha jụọ ajụjụ dị otú a, mgbe ahụ ọ na-enwekarị ụdị: ihe Office Addin na mmemme m. Ntinye ụlọ ọrụ bụ modules pụrụ iche (plug-ins) maka ngwanrọ ọrụ site n'aka Microsoft nke na-agbasa ọrụ ha, ụdị ụdị "Extensions" na nchọgharị Google Chrome nke ọtụtụ ndị mmadụ maara.
Ịnweta ngwa ngwa na gam akporo site na kọmputa na AirMore
Njikwa ntanetị na ịnweta gam akporo Android site na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ n'enweghị njikọ jikọọ na eriri USB nwere ike bụrụ nnọọ adaba ma dịgasị iche iche ngwa ngwa dị maka nke a. Otu n'ime ihe kacha mma - AirMore, nke a ga-atụle na nyochaa. Aga m ebu ụzọ hụ na ngwa ahụ bụ maka ịnweta data niile na ekwentị (faịlụ, foto, egwu), na-eziga SMS site na kọmputa site na ekwentị gam akporo, ijikwa kọntaktị na ọrụ ndị yiri ya.
Esi mara ụda olu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụfọdụ ụdị abụ ma ọ bụ abụ, ma ị maghị ihe mejupụtara ya na onye onye dere ya, taa, enwere ọtụtụ nhọrọ iji chọpụta abụ ahụ n'agbanyeghị ụda ma ọ bụ ihe ọ bụla, nke kachasị na-agụnye (ọ bụrụgodị na ị rụrụ).
Onye Nhazi Onye Mmezi
Ụdị onye nrụpụta na gam akporo na ekwentị na-agbakwụnye ọrụ ọrụ pụrụ iche na ntọala ngwaọrụ maka ndị mmepe, ma mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-arụ ọrụ mgbe nile choro (maka ọmụmaatụ, iji mee ka USB debugging na mgbake data weghachite, gbanwee mgbake omenala, nyocha ihuenyo site na iji adb shell nyere iwu na nzube ndị ọzọ).
Esi edezi PDF
Na nso nso a, edere m banyere otu esi emeghe pdf faịlụ. Ọtụtụ nwekwara ajụjụ gbasara otu esi na ihe ị nwere ike idezi faịlụ ndị dị otú ahụ. Na ntuziaka a, e nwere ọtụtụ ụzọ isi mee nke a, ma anyị ga-eche na anyị agaghị azụta Adobe Acrobat maka puku rubles 10, ma chọọ ịme mgbanwe ụfọdụ na faịlụ PDF dịnụ.
Esi kpochapụ cache na ihe nchọgharị ahụ
Enwere ike ịchọta cache ihe nchọgharị maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Ọtụtụ mgbe, a na-eme nke a mgbe enwere nsogbu ụfọdụ na ngosipụta nke saịtị ụfọdụ ma ọ bụ nchọta ha n'ozuzu, mgbe ụfọdụ - ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ na-ada ngwa ngwa n'ọnọdụ ndị ọzọ. Nke a nkuzi kọwaara otu esi kpochapụ oghere dị na Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex Browser, Mozilla Firefox, IE na Opera nchọgharị, nakwa na nchọgharị na ngwaọrụ Android na iOS ngwaọrụ.
Esi ewepu mgbasa ozi na RaidCall?
Ihe mere laptọọpụ adịghị ejikọta na Wi-Fi
Gbanwee obi na Photoshop
Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke egwuregwu dị na Steam
Nchọpụta nsogbu ụlọ akwụkwọ shw32.dll
N'oge na-adịbeghị anya, Kaspersky na-arụ ọrụ ọhụrụ ntanetịime kọmputa, VirusDesk, nke na-enye gị ohere iṅomi faịlụ (mmemme na ndị ọzọ) ruo 50 megabytes na nha, nakwa yana saịtị Ịntanetị (njikọ) na-enweghị wụnye software antivirus na kọmputa gị site na iji otu ọdụ data ndị ahụ Kaspersky anti-virus ngwaahịa. GụKwuo
Otu esi emepụta diski na-ekpuchi Windows 10
Ịwụnye Windows 8 site na windo mbanye
https://termotools.com ig.termotools.com © N'ihi beginners 2019